राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमिन वि’वादको फै’सला आज हुँदै ! – Life Nepali
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमिन वि’वादको फै’सला आज हुँदै !
काठमाडौं, २३ कात्तिक । भारतको सर्वोच्च अदाललते आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमिन विवादको फैसलाबारे ऐतिहासिक फैसला गर्दैछ । राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमिन विवादको फैसला हुँदै गर्दा उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको नेपाली भूभागमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । असोध्यासँग नजिक पर्ने नेपालगञ्ज, कपिलवस्तुलगायतका सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सु’रक्षा स’तर्कता अपनाइएको सु’रक्षा स्रोतले जानकारी दियो । भारतले रुपेडिया नाका ब’न्द गरेको छ । नेपालले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सु’रक्षा कडा पारेको छ ।
एक सु’रक्षा अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक रुपमा उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन भारतीय पक्षबाट सुझाव आएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘हामीलाई अनौपचारिक रुपमा सु’रक्षा सतर्कताबारे जानकारी आएको छ ।’ फैसलापछि सम्भावित हिं’साको ख’तरालाई निकै ध्या’न पुर्याइएको छ । भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले शुक्रबार साँझ उत्तर प्रदेशका सु’रक्षा प्रमुखहरुसँग भेटेर सु’रक्षा अवस्थाको जा’नकारी लिएका थिए । यो आफैमा ग’म्भीर विषय हो ।
भारतीय पक्षले जिल्ला र केन्द्र तहसम्म नेपाली पक्षलाई सम्भावित सु’रक्षा खतराप्रति सतर्क हुन भनेपछि सीमा सु’रक्षामा क’डाई गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा सु’रक्षा ग’स्ती बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयले पश्चिम तराईका जिल्लाहरुका सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन भनेको बुझिएको छ । गृह स्रोतका अनुसार त्यस क्षेत्रमा निगरानी र सु’रक्षा गस्ती बढाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा सक्रियता बढाएको छ ।
यसैगरी, भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भारतीय समय अनुसार १०ः३० मा राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको जमिन सम्बन्धित विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसला दिने भएको हो । फैसलाबारे शुक्रबार भारतको सर्वोच्च अदालतले सूचना गरिसकेको छ । फैसला भारतको प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसहित न्यायाधीशहरु एस ए बोब्डे, डी वाई चन्द्रचुण, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिरको संवैधानिक इजलाशले गर्ने भएको छ । रोचक यो छ कि इजलाशका एक न्यायाधीश मुसलमान समुदायका हुन् ।
सन् २०१० मा अलाहावाद उच्च अदालतले २.७७ एकर्ड जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्ड, निर्मोही अखरा र राम लल्ला गरी तीन समूहलाई बाँड्ने फैसला गरेको थियो । त्यसवि’रुद्ध विभिन्न समूह त्यहाँको सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ६ डिसेम्बर सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद कट्टरपन्थी हि’न्दुहरुले भ’त्काएका थिए । उक्त स्थानमा विगतमा श्री राम मन्दिर रहेको दा’बी गर्दै म’स्जिदमाथि आ’क्रमण गरिएको थियो । अयोध्याको मुद्दा भारतको राजनीतिमा महत्वमा रहने गरेको छ ।
Previous नेपाल-चीनबीच पनि सीमा विवाद
Next कुवेत पुगेको डेढ महिना नबित्दै जबिन्द्रको मृ:त्यु , परिवार शो’कमा !